Indawo yokuhlala yabucala ekuthiwa yiSunset Gem kunye nendawo yokuxhoma isikhephe kwiLake Murray - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yabucala ekuthiwa yiSunset Gem kunye nendawo yokuxhoma isikhephe kwiLake Murray
Indlu enevaranda entle ekwicala laseLake Murray. Le ndlu inomtsalane inendawo yayo yokuxhoma isikhephe yabucala kunye nedokhi, kodwa ke kwizikhephe ezinkulu, iRamp yesikhephe iDreher Island ingaphantsi kwesiqingatha seemayile. Yonwabela ukubona ubuhle beLake Murray kwigumbi lokuhlala, ekhitshini, okanye kwindawo ethe cwaka kakhulu. Amanzi amaninzi unyaka wonke, kunye nokuloba okumangalisayo kanye edokisini. I-kayak enye iqukiwe. Vula ikhitshi negumbi lokuhlala, nendawo enkulu yokupaka.
Le ndlu ikwisitrato esipheleleyo, ngoko izithuthi nezikhephe azifumaneki. Akukho zindlu ngaphaya kwechibi, nto leyo ekuvumela ukuba uyithande ngokupheleleyo Indalo, kodwa ukuba uziva ngathi uncokola, iBuffalo Creek Bar & Grill ikumgama nje wemizuzu eyi-5 ngemoto okanye ngesikhephe!
Yindawo ekhuselekileyo emaphandleni. Uhambo olufutshane oluya kwiidolophu zaseChapin, eFlorida naseLittle Mountain. Indawo yokutyela ikufutshane kakhulu kwaye inomoya ovuyisayo ngokukhethekileyo ngeempela-veki. IiDeers kunye needada zithanda ukuhambahamba kule ndlu rhoqo.
Siphila kwimizuzu nje embalwa ukusuka kule ndlu ibe sinokufumaneka ngefowuni, ngomyalezo, nangokuthe ngqo nge-app.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Prosperity